डाउनलोड गर्नुहोस् WhatsApp Messenger को लागी Windows
सित्तैमा डाउनलोड गर्नुहोस् को लागी Windows (140.00 MB)
डाउनलोड गर्नुहोस् WhatsApp Messenger,
व्हाट्सएप एक सजीलो स्थापना गर्न नि: शुल्क मेसेजिंग अनुप्रयोग हो जुन तपाईं दुबै मोबाइल र विन्डोज पीसी - कम्प्युटर (वेब ​​ब्राउजर र डेस्कटप अनुप्रयोगको रूपमा) प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं आफ्नो फोनमा व्हाट्सएप डाउनलोड र प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ वा तपाईंको विन्डोज पीसी वा म्याक कम्प्युटरमा डेस्कटप अनुप्रयोगको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। वाट्सएप डेस्कटप अनुप्रयोग तपाइँको फोन मा स्थापित वाट्सएप अनुप्रयोग संग sync मा काम गर्दछ। अर्को शब्दहरु मा, जब एक WhatsApp सन्देश तपाइँको एन्ड्रोइड फोन / आईफोन मा आउँछ, तपाइँ तपाइँको कम्प्युटरबाट हेर्न र जवाफ दिन सक्नुहुन्छ। यद्यपि व्हाट्सएप वेब अनुप्रयोग धेरै उन्नत छैन, यसले आफ्नो आधारभूत कार्य गर्दछ। विन्डोज को लागी व्हाट्सएप सुधार गरीरहेको छ हरेक दिन नयाँ सुविधाहरु जोडिएको।
हामीलाई लोकप्रिय मेसेजिंग अनुप्रयोग व्हाट्सएप मेसेन्जरको डेस्कटप संस्करणको रूपमा भेट्ने व्हाट्सएप पीसीले हामीलाई हाम्रो कम्प्युटरमा व्हाट्सएप प्रयोग गर्ने मौका प्रदान गर्दछ।
एप्लिकेसनको साथ, जुन पूर्ण रूपमा नि: शुल्क प्रस्ताव गरिएको छ, हामी डेस्कटपमा हाम्रा तत्काल सन्देशहरू सबै अनुसरण गर्न सक्दछौं र हाम्रा साथीहरूलाई फाईलहरू, फोटोहरू र भिडियोहरू पठाउन सक्दछौं। डेस्कटप संस्करण व्हाट्सएप मेसेन्जर, जसले हामीलाई सजिलैसँग मोबाइल संस्करणहरूमा सबै सुविधाहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ, डेस्कटपमा वास्तवमै धेरै उपयोगी छ।
सन्देशहरू - सजिलो, भरपर्दो सन्देश: सन्देश परिवार र नि: शुल्क साथीहरू। सन्देश पठाउन व्हाट्सएपले तपाईको फोनको इन्टरनेट जडान प्रयोग गर्दछ, त्यसैले तपाईलाई एसएमएसका लागि भुक्तान गर्नु पर्दैन।
समूह कुराकानी - समूह तपाइँ कुराकानी गर्न चाहानुहुन्छ: समूहहरूसँग कुराकानी गर्नुहोस् जुन तपाईंको लागि महत्त्वपूर्ण हो, जस्तै तपाईंको परिवार र साथीहरू। समूह च्याटको साथ तपाईले एकै पटक २ and6 जनामा ​​सन्देश, फोटो र भिडियोहरू साझेदारी गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं आफ्नो समूहलाई नाम दिन सक्नुहुन्छ, यसलाई मौन राख्न वा तपाईंको प्राथमिकता अनुसार सूचनाहरू सेट गर्न सक्नुहुन्छ।
वेब र डेस्कटपमा व्हाट्सएप - कुराकानी राख्नुहोस्: वेब र डेस्कटपमा व्हाट्सएपको साथ, तपाईं सहजै आफ्नो सबै च्याटहरू तपाईंको कम्प्युटरमा सिंक गर्न सक्नुहुनेछ। यसैले, कुराकानी जारी राख्न यो तपाईलाई सजिलो हुन्छ तपाईले कुन उपकरणबाट मन पराउनुहुन्छ। व्हाट्सएप डेस्कटप अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस् वा व्हाट्सएप वेबमा जानुहोस्।
व्हाट्सएप भ्वाईस र भिडियो कल - स्वतन्त्रतापूर्वक बोल्नुहोस्: भ्वाइस कलको साथ तपाईं परिवार र साथीहरूसँग नि: शुल्क कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ, यदि तिनीहरू अर्कै देशमा भएता पनि। जब आवाज वा पाठ पर्याप्त छैन, तपाईंसँग पनि एक निःशुल्क भिडियो कलको साथ आमनेसामने कुराकानी गर्ने मौका छ। व्हाट्सएप अडियो र भिडियो कलिंग तपाईंको फोनको इन्टरनेट जडान प्रयोग गर्दछ।
एंड-टु-एन्ड ईन्क्रिप्शन - सधैं सुरक्षित: एन्ड-टु-अन्त एन्क्रिप्शन WhatsApp को नयाँ संस्करणमा सुधार गरिएको छ। तपाईंको सन्देशहरू र कलहरू अन्त-देखि-एन्क्रिप्शनको साथ सुरक्षित छन्। केवल तपाइँ र तपाइँको सम्पर्क तिनीहरूलाई पढ्न वा सुन्न सक्दछन्, र बीचमा कोहीले पनि (वाट्सएप पनि गर्दैन) तिनीहरूलाई पढ्न वा सुन्न सक्दैन।
फोटो र भिडियोहरू - साझेदारी हाइलाइटहरू: तपाईं तुरुन्तै फोटो र भिडियोहरू व्हाट्सएप मार्फत पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईं निर्मित क्यामेराबाट क्याप्चर गरेको महत्त्वपूर्ण पल पनि साझा गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंको कनेक्शन गति फरक पर्दैन; व्हाट्सएपमा फोटो र भिडियोहरू पठाउने छिटो छ।
भ्वाइस सन्देश - तपाईंको दिमागमा बोल्नुहोस्: छोटो हेलो भन्न वा एउटा ट्यापको साथ लामो केहि भन्न तपाईं भ्वाइस सन्देश रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ।
कागजातहरू - सेयरिंग कागजातहरू सजिलो भयो: ईमेल र फाईल-साझेदारी एप्सको झन्झट बिना पीडीएफ, कागजात, स्प्रेडशिट, स्लाइडशो, र अधिक पठाउनुहोस्। तपाईं १०० MB सम्म कागजातहरू पठाउन सक्नुहुनेछ।
त्यसो भए व्हाट्सएप डेस्कटप डाउनलोड गर्ने तरिका? कसरी कम्प्युटरमा व्हाट्सएप प्रयोग गर्ने? तपाईं आफ्नो कम्प्युटर डेस्कटपबाट ब्राउजरको आवश्यकता बिना नै प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। व्हाट्सएप डेस्कटप अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न, तपाईले गर्नु पर्ने कुरा; माथिको व्हाट्सएप डाउनलोड बटन क्लिक गर्दै। (यो विन्डोज 8.१ वा नयाँमा चल्दछ र यदि तपाईं -२-बिट विन्डोज अपरेटिंग सिस्टम प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले दोस्रो लि from्कबाट डाउनलोड गर्नुपर्दछ।) Whatsapp डेस्कटप अनुप्रयोग स्थापना गर्नु डाउनलोड गर्न जत्तिकै सजिलो छ। डाउनलोड पूरा भएपछि .exe फाइल खोल्नुहोस् र स्थापना पूरा गर्न निर्देशनहरूको पालना गर्नुहोस्।
तपाईं आफ्नो कम्प्युटरमा दुई फरक तरीकाले व्हाट्सएप प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ: व्हाट्सएप वेब र व्हाट्सएप डेस्कटप। व्हाट्सएप वेब भनेको व्हाट्सएपको ब्राउजरमा आधारित अनुप्रयोग हो। व्हाट्सएप डेस्कटप एक अनुप्रयोग हो जुन तपाईं आफ्नो कम्प्युटरमा स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ। डेस्कटप अनुप्रयोग र व्हाट्सएप वेब तपाईंको फोनमा व्हाट्सएप खाताको कम्प्युटरमा आधारित विस्तारहरू हुन्। तपाईले पठाउनु भएको सन्देशहरू तपाईको फोन र कम्प्यूटर बीच समिकरण हुन्छन्। त्यसैले तपाईं दुबै उपकरणहरूमा तपाईंको सन्देशहरू देख्न सक्नुहुन्छ।
फाईल आकार: 140.00 MB
विकासकर्ता: WhatsApp Inc.
डाउनलोड गर्नुहोस्: 12,402